Endrik'io pejy io tamin'ny 18 Desambra 2018 à 06:13
423 octets ajoutés , il y a 2 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 18 Desambra 2018 à 05:44 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 18 Desambra 2018 à 06:13 (hanova) (esory)
Ny fotoan'ny Advento dia misy Alahady efatra amin'ny ankamaroan'ny fiangonana fa enina kosa izany ho an'ny Fiangonana ortodoksa. Ao amin'ireo Fiangonana manaraka ny fombam-pivavahana romana izay ampiasaina indrindra ao amin'ny Eglizy katolika dia samy manana ny lohahavitralohahevitra voizina ny Alahady tsirairay.
Amin'ny Alahady voalohany, izay atao hoe koa Alahadin'ny Advento, dia miompana amin'ny [[Fiavian'i Kristy Fanindroany]] ny lohahevitra. Arehitra ny labozia voalohany amin'io andro io. Ireto ny vakiteny fanao amin'izany:
Amin'ny Alahady faharoa dia mampahatsiahy ny toritenin'i [[Joany Batista]] (na [[Jaona mpanao batisa]]), izay tonga nanamboatra mialoha ny lalan'ny Tompo, ny famakiana ny Filazantsara na ny Evanjely. Ny vakiteny hafa dia samy manana ny lohahevitra entiny avy koa. Arehitra ny labozia faharoa amin'io andro io. Ireto ny vakiteny fanao amin'izany:
Amin'ny Alahady fahefatra dia mifantoka amin'ny ny zava-nitranaganitranga momba an'i [[Maria (renin'i Jesoa)|Maria]] sy i [[Josefa (vadin'i Maria)|Josefa]] izay mitarika mivantana ho amin'ny fahaterahan'i Jesoa, ary ireo vakiteny hafa dia momba izany ihany koa. Arehitra ny labozia fahefatra amin'io andro io. Ireto ny vakiteny fanao amin'izany:
Fanao amin'ny fiangonana toy ny any Alemaina sy amin'ny faritra sasany ao Eoropa ny manantona ilay atao hoe "satrobolinahitry ny Advento" na "satroboninahitry ny Fiaviana" izay ametrahana labozia iray isan-kerinandro mandra-pahatongany ho efatra amin'ny andron'ny [[Noely]] (na [[Krismasy]])<ref name=":0" />. Matetika dia miloko mena ireo labozia ireo nefa misy ny mampiasa loko hafa toy ny manga, ny mavokely, ny volomparasy sns.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/960518"